नार्कोनन सफलताको भिडियो - मन्डी डी
नार्कोनन: विश्वव्यापी उदेश्य
५० वर्षदेखि लागुऔषध मुक्त जीवन बनाउन सेवामा समर्पित
पहिचान र मूल्यांकन
अध्ययनहरू र रिपोर्टहरू
लागुऔषध सुधार केन्द्र
ग्रेजुएटहरू यसो भन्नुहुन्छ
ग्रेजुएटका परिवारले यसो भन्नुहुन्छ
सार्वजनिक सेवाको घोषणा
केन्द्र पत्ता लगाउनुहोस्
लागुऔषध सम्बन्धी शिक्षा
एल. रन हब्बर्ड
हाम्रो बारेमा नार्कोननले किन काम गर्छ प्रमाणपत्रहरू लागुऔषध दुर्व्यसन सम्बन्धी जानकारी gcui_narconon:nn-Blog एल. रन हब्बर्ड
नार्कोननले किन काम गर्छ
लागुऔषध दुर्व्यसन सम्बन्धी जानकारी
⨯ English Español Nepali Czech Turkish सबै क्षेत्र /भाषा
फोन गर्नुहोस् 1-877-620-3481 अहिले सहयोग पाउनुहोस्
यो भिडियो रीप्ले गर्नुहोस्
अर्को भिडियोप्ले गर्नुहोस्:
कुनैपनि लागूपदार्थ सुधार कार्यक्रममा, परिणामहरू फरक हुन्छन्।
ग्रेजुएटहरू यसो भन्नुहुन्छ ग्रेजुएटका परिवारले यसो भन्नुहुन्छ ग्रेजुएटको कथाहरू सार्वजनिक सेवाको घोषणा
"फेरि मेरो परिवार फिर्ता पाए"
म हाइस्कुल पढ्दा सप्ताहन्तमा पार्टी जान्थे, गाँजा खान्थे र कोकिन पनि लिन्थे। हाइस्कुल सक्दा मेरो पेटमा बच्चा थियो। त्यो बेला मेरो प्रेमी नराम्रो दुर्घटनामा परे। जसले मलाईं एक्ली आमा हुँदा झेल्नुपर्ने समस्या हल गर्ने उपायस्वरूप लागुपदार्थको संसारमा धकेल्यो।
आक्सिकोन्टिन प्रयोग गर्न थाले। त्यसले मलाईं मेथाम्फेटामाइन र हिरोइनको कुलतमा धकेल्यो। यसमा म झन् झन् फस्दै गए।
मलाईं जीवन आफ्नो नियन्त्रणमा छ जस्तै लाग्दैनथ्यो। मलाईं नियन्त्रण गर्ने हिरोइन, मेथ थियो।
कुलतमा फसेपछिको सबैभन्दा खराब दिनमा म छोरीसँग पार्कमा थिए। म कुलतमा अझै बढी डुब्छुँ कि भन्ने चिन्तामा थिए। मैले आफैंलाई भन्दा बढी माया गर्ने त्यो बालिकालाई पनि यो औषधी खुवाउँदै छुँ भन्ने लाग्यो।
त्यही घटना नै मलाईं नार्कोननसम्म ल्याउने माध्यम बन्यो।
यो कार्यक्रममा आएपछि म स्वस्थ थिए, अनुहारमा चमक आयो र म खुलेर हाँस्न थाले।
यसले मलाईं लागुऔषध माथिको निर्भरताबारे सिकायो। जुन कुरोबाट म टाढा जाँदै थिए।
म किन औषधी प्रयोग गरिहरेको छुँ भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्न सक्षम भए।
मैले मेरी छोरी फिर्ता पाएकी छुँ र डेढ वर्षे छोरा पनि छ।
अहिले मेरो परिवारसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ, जुन म नार्कोनन आउनुअघि कहिल्यै थिएन।
यसले मलाईं सतप्रतिशत जीवन फिर्ता दिएको छ।
"सम्भावनाहरू अनन्त छन्"
"आफ्नो जीवनको नियन्त्रण गर्न सक्ने"
"जीवनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनसक्ने"
मादकपदार्थबाट छुट्कारा पाउनुहोस्
"आफूलाई पहिले जस्तै पाउँदै"
क्रिस्टल मेथ मुक्त हुनुहोस्
® नार्कोनन ओजाई
P.O. Box 1509, Ojai, CA 93024, United States
नार्कोननलाई अन्य सुधार केन्द्रहरूभन्दा के कुराले भिन्न बनाउँछ भनी अधिक जानकारी लिनुहोस्।
नार्कोनन लागुऔषध सुधार केन्द्र लागुऔषध रहित विथड्रल न्यु लाइफ डिटक्सिफिकेसन जीवनका
नार्कोननको सफलताको इतिहासको बारेमा जान्नुहोस्।
नार्कोननको बारेमा विश्वव्यापी लक्ष्य ५० वर्ष देखि : लागुऔषध मुक्त जीवनको सेवामा समर्पित विश्व-स्तरीय सुबिधाहरू पहिचान र मुल्यांकन अध्ययन तथा रिपोर्टहरू एल. रन हब्बर्ड
लागुऔषध सुधार केन्द्रका पेशेवरहरू र सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरूको परामर्श सेवा
थप जानकारी कार्यक्रम सूचना पोर्टफोलियो थप जानकारीको लागि अनुरोध गर्नुहोस् नार्कोननलाई सम्पर्क गर्नुहोस् लागुऔषध सम्बन्धी शिक्षा सार्वजनिक सेवाको सन्देशहरू
नार्कोननका विश्वभरिका केन्द्रहरू
नार्कोनन एक विश्वकै सफलताको कथा हो
Narconon.org संयुक्त राज्य युरोप सँयुक्त अधिराज्य ल्याटिन अमेरिका नेपाल
English Español Nepali Czech Turkish सबै क्षेत्र /भाषा
© 2020 नार्कोनन ओजाई. सर्वाधिकार सुरक्षित। • अनलाईन गोपनीयता सूचना • प्रयोग सर्तहरू • गोपनीयता अभ्यासहरूको सूचना • अस्वीकृति: व्यक्तिगत परिणामहरूको कुनै गारन्टी गरिएको छैन र यो व्यक्ति अनुसार भिन्न हुन सक्छ।
नार्कोनन र नार्कोननको लोगो Association for Better Living and Education International को स्वामित्वमा रहेको एउटा व्यवसायिक चिन्ह (ट्रेडमार्क) तथा सेवा चिन्ह (सर्भिस मार्क) हो र सो संस्थाको अनुमति लिएर प्रयोग गरिएको हो।